Naqshadeeye wuxuu hagaajiyaa astaamaha sida xun loo qaabeeyey | Abuurista khadka tooska ah
Goorma ayaa dib loo qaabeynayaa astaamaha aan waligood noqonin astaan
Manuel Ramirez | | Fanaaniin, logos, dhowr
Waa runtaa Astaamaha waxay noqon karaan kuwo jahwareer leh iyagoo aad u feker ah. Waa fikradda ka dambeysa dib-u-habeyntaan uu sameeyay naqshadeeye, iyo in aan fiirino qaar ka mid ah shaqada, wuxuu ku dhammaaday dib u habeynta sidii ay ahayd.
Qaarkood ayaa caan ku ah naqshadeynta astaanta, mana ahan sida wanaagsan ee loo sameeyay laakiin tan kale, sidaa darteed soo jeedintiisu waxay noqotay mid fayras ah si ay iyaduna u dhex marto xariiqyadan xiisaha iyo kaftanka qaar ka mid ah astaamahiisa darteed; iyo waxa ay tahay inaanan waligeen sameynin.
Emanuele furan bilaabay hagaajinta astaamaha ugu xun inuu ku arkay mashruuciisa 'The Logos kii ugu xumaa ee abid dib loo naqshadeeyo'. Waxay ahaayeen sagaal ka mid ah astaamihi ugu xumaa ee uu awood u yeeshay inuu helo si uu u falanqeeyo dhibaatooyinka astaamahaas oo uu uga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa.
Horumarintani waxay si muuqata uga muuqatay xaaladaha qaarkood. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan shaqadan uu qabtay Abrate ayaa ah inay indha indheynayso tirada calaamadaha taas waxaa ku jira faahfaahin qaar oo jahwareer u horseedi kara. Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah in mararka qaarkood aan la arkin marka hore, sidaa darteed had iyo jeer waa wax xiiso leh in lala wadaago si dadka kala duwan ay u helaan cilado ama macno ka duwan fikirka weyn.
Midka ku guuleysta abaalmarinta waa naqshada astaanta Instituto de Estudos Orientais oo aan loo baahnayn in wax laga sheego maxaa yeelay horay ayey u wada sheegtay. Way cadahay in mashruucan ninkani astaanta u tahay mid ku haboon in loo qaabeeyo si sax ah loona siiyo aragti ay tahay inay bixiso. Ma aha mid u muuqda ...
Laakiin kaalay maxaa waxaa jira astaamo aad u tiro badan oo ay tahay in lagu qaado iyagoo leh tuugo. Kama hadlayno waxna si aad adigu go'aan uga gaadho. Laakiin kaalay maxaa sidoo kale waxay ku dhacday McDonald's.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Goorma ayaa dib loo qaabeynayaa astaamaha aan waligood noqonin astaan
charly bar dijo
Hahaha waa maxay qosol si aad u aragto gafafka qaar, waxaan u maleynayaa in mararka qaarkood aad ku haysato hortaada oo aadan arkin qaladkaaga, fikradda labaad marwalba way fiicantahay. haha
Ku jawaab Charlybar
Marka miraha dhaqdhaqaaqa gaabis ahi ay jidhka ka falceliyaan xayeysiintan Swisse Me
Maaskaro xariifnimo iyo sixir leh oo isu beddelay Harry Potter